Saxiixa cusub ee kooxda Real Madrid Rodrygo oo qarsan waayey taageerada uu u hayo Eden Hazard – Gool FM
Barcelona oo Camp Nou guul kaga gaartay kooxda Eibar, xilli Messi uu AFARLEEY ka kacay… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Leicester City iyo Man City ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Chelsea oo guul kaga gaartay kooxda Tottenham garoonka Stamford Bridge… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Barcelona iyo Eibar ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay
Shaxda rasmiga ah kulanka London Derby ee Kooxaha Chelsea iyo Tottenham oo la shaaciyey
Halyey Kooxda Liverpool ah oo kula taliyey Timo Werner inuusan ku biirin Reds!
Saxiixa cusub ee kooxda Real Madrid Rodrygo oo qarsan waayey taageerada uu u hayo Eden Hazard
(Madrid) 18 Juunyo 2019. Sida wararku ay sheegayaan saxiixa cusub ee kooxda Real Madrid Rodrygo ayaa qarsan kari waayey taageerada weyn ee uu u hayo ciyaaryahanka isna ku cusub kooxda Los Blancos ee Eden Hazard.
Da’yarka reer Brazil ee Rodrygo Goes ayaa farxad ka muujiyey inuu ka garab ciyaari doono mardhow Eden Hazard oo uu sheegay inuu taageero buuxa u yahay.
Kaddib wareysi uu siiyey Jariiradda Marca ee ka soo baxda dalka Spain, ciyaaryahan Rodrygo Goes ayaa xusay inuu taageere weyn u yahay xiddiga reer Belgium ee Hazard, isla markaana uu xitaa gaaray inuu sawirka Eden saarto shaashadda taleefoonkiisa gacanta.
“Waa xiddig aan mar weliba la socday, waxaan isaga sawirkiisa u haystay inuu ii saarnaa shaashadda taleefoonkeyga, kaliya ma sawiran kartaa haatan anigu waxaan u socdo inaan isaga la ciyaaro.” ayuu yiri Rodrygo.
Kaddib markii Rodrygo la weydiiyey sida uu dareenkiisu noqon lahaa marka uu la kulmo Hazard ayaa waxa uu ku jawaabay: “Waan hubaa inaan noqon doono mid dareenkiisu aad u sarreeyo, waana ku faraxsanaan doonaan inaan la kulmo isaga.”
Goolhaaye Alisson Becker oo amaan kala dul dhacay saaxiibkiis Virgil van Dijk
Kooxda Manchester City oo diyaar u ah inay bixiso lacagaha lagu burburin karo heshiiska Rodri